I-Sulforaphane, eyaziwa nangokuthi "i-dl-sulforaphane", iyinhlanganisela yezitshalo zemvelo etholakala kwimifino eminingi ye-cruciferous efana ne …… ..
Aukuphikisana I-Sulforaphane powder ikakhulu isebenza kuma-supplements.
I-Sulforaphane, eyaziwa nangokuthi "i-dl-sulforaphane", iyinhlanganisela yezitshalo zemvelo etholakala kwimifino eminingi ye-cruciferous efana ne-broccoli, iklabishi, ukholifulawa ne-kale.
I-Sulforaphane iphephile uma isetshenziswa kumanani atholakala ekudleni. Kepha alukho ulwazi olwanele olutholwayo ukwazi ukuthi kuphephile yini ukuthatha ngomlomo njengomuthi.
-Sulforaphane ingaqala ngokushesha uhlelo lokuphulukisa lomzimba, uhlelo lokukhipha ubuthi emzimbeni, ukulungisa izitho ezinhlanu zangaphakathi, ibhalansi, ukulungisa izitho ezilimele, i-sulforaphane inomphumela wokuvimbela nokwelashwa kwe-gout.
-Sulforaphane ingasetshenziselwa ukulwa nomdlavuza. I-Sulforaphane ingavimbela ngempumelelo isilonda esiswini, i-atrophic gastritis eguqula umdlavuza wesisu